सवारी दु८र्घटना : आमाको पेट फु’टेर बच्चा सडकमा ! पछि के भयोत ? छिटो हेर्नुस – Gorkhali Dainik
सवारी दु८र्घटना : आमाको पेट फु’टेर बच्चा सडकमा ! पछि के भयोत ? छिटो हेर्नुस
March 31, 2021 497
सवारी दु८र्घटना : आमाको पेट फु’टेर बच्चा सडकमा ! तरपनि बच्चा बाचेका थिए
ब्राजिलमा हालै एक अचम्म लाग्दो घ८टना घटेको छ । एक गर्भवती महिलाको दु८र्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ । तर, उनको गर्भमा रहेकी छोरी भने बाँच्न सफल भएकी छन् ।दु८र्घटनामा परेकी आमाको गर्भ फुटेर बाहिर निस्किएकी उनी चमत्कारिक रुपमा बाँचेकी छन् । यो घ८टना शनिवारको हो, काठका गोलया लिएर गइरहेको ट्रक शनिबार दिउँसो साओ पाउलो र क्युरिटिबाको बीचमा जाँदा सडकमै पल्टिदा उक्त ट्रकमा लिफ्ट लेकी गर्भवती महिलाको मृ८त्यु भयो । घ८टनास्थलमा पुगेर प्रहरीले काठका गोलिया हटाउँदा त्यहाँ दबिएको महिलाको श८व भेटियो । महिलाको पेट फुटेको थियो । त्यहाँबाट केही दूरीमा नवजात बालिका रोइरहेकी भेटिइन् ।
प्रहरीले तत्काल एम्बुलेन्स बोलाएर बालिकालाई अस्पताल पठायो । अस्पतालले बालिकालाई गियोवान्ना नाम राखिदिएको छ । जसको अर्थ हुन्छ – भगवानद्वारा बचाइएकी ।
आजकाल म’सल्स बनाउन र तौल कम गर्ने डा’इट प्लानमा मानिसहरु प्रोटिन स’प्लिमेन्टको रुपमा खानामा सोयाबीन समावेश गर्ने गर्छन् । यसलाई दैनिक खाने पनि गर्छन् । सोयाबीनमा दुध, अण्डा र मासुमा भन्दा धेरै प्रोटिन पाइन्छ ।तर ए’मिनो ए’सिड, क्या’ल्सियम र फा’इबरले भरपुर सो’याबीन थुप्रैका लागि हा’निकारक पनि हुनसक्छ । हा’इपरटेन्शनदेखि मृ’गौलासम्मको रो’गलाई यसले थप वृद्धि गर्नसक्छ ।भारतकी डा’इटिशियन एवं न्यू’ट्रिशियन ए’क्सपर्ट ज्योती शर्माका अनुसार सो’याबीनबाट हुने ए’लर्जी गहुँका उत्पादन (ग्लू’टेनको ए’लर्जी) बाट हुने ए’लर्जीको तुलनामा धेरै हुन्छ ।
केही रो’ग भएका व्यक्तिले यसको सेव’न गरे थप स’मस्या नि’म्त्याउन सक्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔं-; यदि तपाईंलाई कुनै प्रकारको मुटु रो’ग छ भने सो’याबीन नखानुहोस् । अनुसन्धानका अनुसार यसमा ट्रा’न्स फ्या’ट कम हुन्छ जुन मु’टुका लागि राम्रो मानिँदैन । यसले हा’इपरटेन्सन ब’ढाउने काम पनि गर्दछ ।डा. शर्माका अनुसार सो’याबीनमा ए’मिनो ए’सिड हुन्छ जसले शि’शुको विकास रो’क्ने काम गर्दछ । त्यसकारण ग’र्भवती महिलाले यसको से’वन गर्नुहुँदैन ।मृगौलाको काम प्रो’टिनलाई फि’ल्टर गर्नु पनि हो र सो’याबीनमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ ।
यस्तोमा जुन व्यत्तिलाई मृ’गौलासम्बन्धि रोग छ उनीहरुले सो’याबीन निकै कम मात्रामा खानुपर्छ ।सो’याबीनमा पाइने केही ए’मिनो ए’सिडले ह’र्मोनलाई प्रभावित गर्दछ । सो’याबीन था’इराइडसँग जोडिएको था’इरोक्सिन ह’र्मोनलाई कम वा वृद्धि गर्छ । यसले था’इराइडलाई ब’ढाउने गर्दछ । त्यसकारण थाइराइडका बि’रामीले सो’याबीनबाट टाढै रहनुपर्छ ।यदी तपाईं ए’सिडिटी को स’मस्याबाट ग्र’सित हुनुन्छ भने सो’याबीनको आटाको रोटी खान आवश्यक हुन्छ । जसले पेटलाई सफा राख्छ ए’सिडिटी की स’मस्या ह’ट्छ ।जो त’नाव र मा’नसिक रो’गबाट पी’ष्ति हुन्छन् उनीहरुका लागि सो’याबीन फा’इदाजनक हुन्छ ।
Prevछिटो हेर्नुस, चितुवासँग मोटरसाइकल ठोकिएपछि के भयोत ?
Nextरहिनन् मोडेल तथा कलाकार आँशु राजवँशी, कलिलै उमेरमा यस्तो रोगले गयो ज्यान